Cawayska Washington, 01 February 2018
Khamiis 1 February 2018
Barnaamijka Caweyska Washington ee todobaadkan waxaa ku jira qodobbo kala duwan oo aad u xiisa badan, waxaana soo jeedinaysa Sahra Ciidle Nuur.
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaan idiin ku haynaa qodobbo xiiso leh oo ay ka mid yihiin dood suugaaneed u dhaxaysa Qurbo-joogta iyo Qaran-joogta, iyada oo aad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay Abwaan Axmed Cabdillaahi (Axda) oo ku sugan London
Dhageyso Barnaamijka Caweyska Washington. Sahra Ciidle Nuur, ayaa soo jeedinaysa.
Dhageyso Barnaamijka Caweyska Washington oo toddobaadkan xiiso gaar ah leh. Sahra Ciidle Nuur, ayaa soo jeedineysa.
Dhageyso Barnaamijka Caweyska Washington oo aad xilliyadan oo kale nooga barateen. Sahra Ciidle Nuur, ayaa soo diyaarisey soona jeedineysa.